တနင်္လာနေ့ကSändarenသတင်းစာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်က Apg29 မှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မထင်ဘူး။ သူကမှတ်ချက်တွေအများကြီးအကြောင်းအကြောင်းကိုဖတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ငါထင်သောအရာကိုသိလိုခဲ့သည်။
ငါပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီတွေအများကြီးဖြည့်မှတ်ချက်လယ်ကွင်းထဲမှာကြည့်ပါ။ ရလဒ်မှာလူတို့သည်ယေရှုအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်မှောင်မိုက်ခြင်းခံရသည်။ Apg29.nu ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာယေရှုအကြောင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပြရန်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
သို့သော်ယခုဖြစ်ပျက်နေသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုနှင့်ဆိုင်သောသတင်းကိုဤပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီများဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ အချက်အလက်များသည်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်များကိုကိုးကားခြင်းမရှိဘဲလေထုထဲမှထုတ်ယူထားသောသီအိုရီများမှာ angel ၀ ံဂေလိစာမျက်နှာဖြစ်သောယေရှု၏စာမျက်နှာဖြစ်သော Apg29 တွင်ဤတွင်မကိုက်ညီပါ။
သူ၏မေးခွန်းများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးဖြေကြားရန်ကြိုးစားသော်လည်းယေရှုခရစ်၏သတင်းတရားကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကို၎င်း၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကို၎င်း၊ ငါသက်သေခံ၏။ ဒါကငါ့ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဘလော့ဂ် site ၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး Apg29.nu သည်၎င်း၏ raison d'êtreကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
စာနယ်ဇင်းသမားထံကျွန်ုပ်၏သဘောထားကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းဖော်ပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သူသည်ထူးဆန်းသောထူးဆန်းသောပူးပေါင်းကြံစည်မှုများကိုသာစိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ ဆောင်းပါးSändarenမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေတကယ်ရှိပေမယ့်ငါမှတ်ချက်များအတွက်လုပ်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအများကြီးနှင့်အတူငါတကယ်သဘောမတူဘူး။ အဲဒီအစားယေရှုကိုကြွေးကြော် - သင်ရေရှည်၌အနိုင်ရ!
Vecka 25, tisdag 22 juni 2021 kl. 07:04